How to writeaspeech (မိန့်ခွန်းရေးသားနည်း) - Myanmar Network
Posted by Win Mya Swe on January 8, 2013 at 13:48 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
မိန့်ခွန်းရေးတာနဲ့ စာစီစာကုံး (အက်ဆေး) ရေးတာ တူညီတာတွေ အများကြီးဘဲ။ မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောရတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောတာကို နားထောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာနဲ့ ရေးထားတာကို ဖတ်ရတဲ့ စာစီစာကုံးနဲ့ မတူညီဘဲ ထူးခြားနေတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ ရှိနေပါတယ်။
၁။ မိန့်ခွန်းကို ပြောရမယ့် အခြေအနေအချိန်အခါ၊ ပွဲလမ်းအခမ်းအနား၊ ပရိသတ်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့ လေသံ (အခက်အခဲဖော်ပြ၊ လေးနက်၊ လွတ်လပ်၊ ရယ်စရာမောစရာ စသည်ဖြင့်) နဲ့ မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ရမယ့်အချိန် အလိုက် စီစဉ်ပြောကြားရပါမယ်။
၂။ မိန့်ခွန်းရဲ့ အာဘော်နဲ့ ဘယ်လို ပေါ်လွင်အောင် ချဉ်းကပ်ပြောဆိုမလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ပါ။
၃။ အဖွင့်နိဒါန်းဟာ ထိရောက်မှုရှိပြီး ပရိတ်သတ်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိနိုင်ရမယ်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပြန်ပြောပြတာမျိုး၊ ရယ်စရာပြောတာမျိုး၊ ရည်ညွှန်းကိုးကား ပြောဆိုတာမျိုး၊ တွေးတောစဉ်းစားစေတဲ့ မေးခွန်း ဒါမှမဟုတ် အဆိုတစ်ခုကို မေးမြန်း ပြောဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နိဒါန်းက သိပ်မရှည်ဘဲ စက္ကန့် ၃၀ လောက်နဲ့ ပြီးသင့်တယ်။
၄။ မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာလည်း ဆွဲဆောင်ရေးသားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သတင်းအချက်လက် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ် ရေးသလိုဘဲ ပါဝင်ရမယ့် အချက်တွေကို အကျဉ်းစီစဉ်ထားရမယ်။ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောရတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်မျိုးပါ။
၅။ အချက်အလက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်လက်တည်ဆောက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် စုစည်းစီစဉ်ပါ။ အထွေထွေ သိစေလိုရင်း အာဘော်ကို ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်အောင်၊ နောက်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ၀င်နိုင်အောင် အချက်အလက်တွေကို ထပ်ဖြည့်နိုင်တယ်၊
၆။ အချက်အလက် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကူးအပြောင်း ကောင်းမွန်စေရပါမယ်။
၇။ အစကောင်းဖို့ လိုသလို အဆုံးလည်းကောင်းဖို့ လိုတယ်။ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အချက်တွေကို ပြန်ပြီး အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါ။ နားထောင်သူတွေ မှတ်သား စဉ်းစားနိုင်အောင် နောက်ထပ် ပြောနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်း မေးနိုင်တယ်။
၈။ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ချရေးပြီး အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကျစ်လစ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိတဲ့အပြင် လက်ခံချင်စရာကောင်းတဲ့ မိန့်ခွန်းဖြစ်လာအောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ရေးပါ။
၉။ နောက်ဆုံးစာမူကို ကျေနပ်ပြီဆိုရင် အခြားသူ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကို ပြကြည့်ပါ။ မိန့်ခွန်းပြောရမယ့် အခြေအနေအချိန်အခါနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အချက်တွေ ပါနေသလား၊ အချက်အလက်တွေ စုစည်းစီစဉ်ပုံ ချို့ယွင်းချက် ရှိနေသလား၊ အတွေးရှင်းရဲ့လား၊ သဒ္ဒာနဲ့
အသုံးအနှုန်း အမှားတွေ ရှိသလား၊ မလိုတာတွေ ပါနေသလား၊ လိုတာတွေကျန်နေသလား၊ ကြည့်ခိုင်းပါ။ သူတို့ဆီက ပြန်ကြားရတာကို အခြေခံပြီး လိုအပ်သလို စာကြမ်းရေးပါ။
၁၀။ မိန့်ခွန်းကို အစမ်းလေ့ကျင့် ပြောကြားတဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖော်ပြဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန့်ခွန်းကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ စာချောပေမယ့် အသံထွက်ပြီး ပြောတဲ့အခါ အဆင်မပြေတာလည်း ရှိတတ်တဲ့အတွက် ရေးထားတဲ့မိန့်ခွန်းအတိုင်းအပြောကျင့်ပြီး လိုအပ်ရင် ထပ်ပြင်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မိန့်ခွန်းစာမူချော ရပါပြီ။
Permalink Reply by Aung Ko Ko Htun on January 8, 2013 at 16:44
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 8, 2013 at 19:12
Permalink Reply by painghoone on January 8, 2013 at 21:11
Permalink Reply by Soe Soe on January 8, 2013 at 21:15
Permalink Reply by padout,layy on January 9, 2013 at 2:09
Permalink Reply by nay soe thant on January 9, 2013 at 3:35
THANKS FOR UR PRESENTS.UPLOAD NEXT GOODS LIKE THIS.
Permalink Reply by moe wai lwin on January 9, 2013 at 14:32
ကဲဗျာ အောက်မှာတော့ မိန်းခွန်းပြောမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကကျေးဇူးတင်စကားပြောနေကြပါပြီနော်..
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 9, 2013 at 14:42
Permalink Reply by sandakuu01 on January 9, 2013 at 15:43
Permalink Reply by Kay Zar Naing on January 9, 2013 at 17:05
Permalink Reply by Baby.lay. on January 9, 2013 at 19:55